Nanatanteraka ilay " operation pick pocket" izay fanaony ny CSP1 tamin’io andro io nanomboka tamin’ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora sy 30mn teo. Vehivavy ny iray tamin’ireo tratra izay fantatra fa efa Renin-dahiny tokoa.Efa mpamer-ikeloka ny roa tamin' ireto voasambotra ireto. Ilay vehivavy dia mpanataka ny poketran'ireo vehivavy mitovy aminy fa ireo lehilahy kosa dia manao sinto-mahery avy hatrany raha mahatsikaritra olona mitondra zavatra tsaratsara na mivimbina finday avo lenta. 17 ka hatramin'ny 41 ny sala-taonan'izy ireo. Natolotra ny fampanoavana omaly izy ireo ary nampidirina am-ponja vonjy maika.